रोनाल्ड बर्नार्ड र 'नयाँ युगको नि: शुल्क' जुन नि: शुल्क व्यक्ति मानिसको पुन: सम्मान गरिन्छ भन्ने धारणा: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
रोनाल्ड बर्नार्ड र धारणा को 'नयाँ युग' जसमा मुफ्त मनुष्य को फेरि सम्मान गरिन्छ '
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	23 मार्च 2018 मा	• 24 टिप्पणिहरु
मैले धेरै प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गरे मेरो अन्तिम लेख रोनाल्ड बर्नार्डको बारेमा थाहा पाएको छ कि धेरैले उनको कथा सुन्दर र सुन्दर खोज्छन्। दुर्भाग्यवश, मलाई निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ कि यी मानिसहरु स्पष्ट रूपमा बिस्तारै छन् एनएलपी प्रविधिहरू, जसलाई उनीहरूले कुल छुटेको प्रमाणको आधारमा मानिसहरूलाई समझाउन सक्षम छन्। उनको साक्षात्कार राम्रो तरिकाले निर्देशित गरिएको छ र फिलिम प्रविधि र उद्घाटन धुनले बौद्ध प्रसारणकर्ताको शैलीको सावधानीको सम्झना दिलाउँछ, जसको साथ उहाँले बेहोशपूर्वक धेरै द्वारा आध्यात्मिक गुरु को चित्रलाई चित्रण गर्दछ। उहाँका कथाहरू महसुस हुन्छन् किनकी उसले विषयहरूमा अपील गर्दछ कि वैकल्पिक मेडियामा धेरै काम गर्दै छन्। यद्यपि, बर्नार्डबाट कुनै पनि कथा प्रमाणित गर्न सकिँदैन। यो आफैमा केहि पनि मतलब छैन, के थिए कि उनी गोपनीय रूपमा 'मेरो साथ ठीक हो' को छवि सिर्जना गर्न प्रयोग गर्दछ र 'म एक पुरा प्रक्रिया मार्फत गएको छ'। यसले मलाई इङ्गयालिक मंडलहरूको एक थोपा भन्दा सम्झना दिलाउँछ जसले सबैलाई गहिरो घाटीमा जान्छ र अन्ततः प्रभुसँग समाप्त भयो र अब पूर्णतया आनन्दित हुन्छ। रोनाल्ड बर्नार्डले यस समयको सुसमाचार सुसमाचारको चित्रण गर्दछ, तर येशूलाई बिना।
हामी हेरौं भिडियो भाग5फेरि पोर्चुगलमा आफ्नो सफल कम्पनीको लागि कुनै प्रमाण छैन र उनको जेलको अवधि वा उनीहरूको कथित करोडको लागि कुनै प्रमाण छैन। तिनीहरू सबै कथाहरू अघिल्लो कथाहरू बनाउनका लागि कथाहरू जस्तो देखिन्छन। साक्षात्कारको श्रृंखलामा अन्तर्वार्ता सन्देश संधै सधैँ छ: म उच्च देखि आएको छु, गहिरो घाटीमा गएर बुराईको विरुद्ध लडाइँ र मैले तपाईलाई सबै बचत गर्न चाहने पाठ सिकें। एनएलपी भाषा यसको अत्यधिक अतिरक्त हातमा प्रयोगमा (एनएलपी प्रभावको लागि आवश्यक) सँधै आफुलाई दर्शकको ध्यान केन्द्रित गर्दछ वा आलोचनाको प्रति उत्खननको इशारा गर्दछ। बर्नार्डको सबै कुराले अहिलेसम्म आवश्यक अनुहारको ज्ञान र चासो क्षेत्रहरूमा अपील गर्दछ। "हामीसँग एक नायक भएको छ जुन अनुभव गरेको छ र हामी सबैले सोचेको छौँ। हाम्रो नयाँ नेता, नयाँ गुरु छ।"
निस्सन्देह, रोनाल्डले उनीहरूलाई यो व्यावहारिक ढंगले खेल्नुपर्छ र हरेक गुरुको रूपमा आफूलाई आफूलाई विनम्र र सानो बनाउनुपर्छ। त्यो चाल छ। र अब मार्टिन व्रिजल्याण्ड यस व्यक्तिको विरोध पनि छ। "यो 'बिरुद्ध लडाइँ' हो र त्यसैले तपाईले के गर्नु पर्छ यो दोहोरो यथार्थवादी वास्तविकताको हो र तपाईले दोहोर्याउनु भयो र आर्कनहरु लाई खाना खान्छ", के भन्छ कि धेरैले त्यो दिनेछ।
मैले प्राप्त गरेको प्रतिक्रिया मध्ये एक थियो:
रोनाल्डले तपाईंलाई इस्तीफा गर्नु हुँदैन, तर बढ्नको लागि। र त्यो नयाँ उमेर होइन, तर हरेक गैर-हिंसात्मक आचरण (धर्म, दर्शन, ...) भन्नुहुन्छ। आइंस्टीन र गांधीले पनि यसो भने र तदनुसार जीवन बिताए। यो आइंस्टीनको दावीमा आउँछ जुन समस्या सिर्जना गरी त्यही चेतनाबाट समस्या समाधान गर्न सक्दैन। अन्धकार अन्धकारसँग जोडिन सकिँदैन। हरेक सत्य पनि एक फरक चेतना देखि फरक देखिन्छ। त्यसैले शायद तपाईं आफ्नो निष्कर्ष र निर्णय संग धेरै समयमै हुनुहुन्छ
रोनाल्डले जाहिरी तरिकाले ठूलो समूहहरूको लागि अनुवाद गर्न सफल बनाएको छ जुन हामी यति धेरै सुन्न चाहन्छौं। यो गैर-हिंसक उत्तीर्णता ('शुभकामना') जुन आध्यात्मिक आन्दोलनहरूको माध्यमबाट लुइसिस ट्रस्ट संयुक्त राष्ट्र संगठनको माध्यमबाट फैलिएको छ र यो तहमा रहेको आयामी संसारमा बल क्षेत्रमा आधारित छ, जहाँ हामीले दुष्टको विरुद्ध लड्नु हुँदैन, तर आफ्नै क्षेत्र छोड्नु पर्छ र यसको लागी केहि सकारात्मक राख्नु पर्छ। "अन्धकार अन्धकारको साथ लड्न सकिँदैन" तर एक टर्चले काम चमत्कार गर्दछ। चेल्याटान र सुरक्षा जालहरूको कला सधैंभरि छ कि उनीहरूको दु: ख र छलले सत्यका ठूला भागहरूमा प्याक पार्छ; यो समय पनि। रोनाल्ड बर्नार्डले हामीलाई क्यालिमोरो मोडमा राख्नुपर्छ, जहाँ हामी अवधारणामा विश्वास जारी राख्छौं 'तिनीहरू ठूलो छन् र म सानो हुँ र त्यो उचित छैन'। हामी अन्धकारसँग लड्न सक्दछौं, यसमा ज्योति राखेर, अब यो देखिन्छ। "हां र यो रोनाल्ड बर्नार्ड छ! उहाँले पावर पिरामिडमलाई बेवास्ता गर्नुहुन्छ र यो रोशनी राख्नुहुन्छ! उहाँले मात्र भन्छन् कि तपाईं यसको साथ लड्न हुँदैन, किनकी तपाईं मृत्यु वा पागल घर संग मर्नुहुनेछ!"हो, रोनाल्ड बर्नार्डले एक कथाको साथ आउँछ जसमा उहाँले सबै कुरालाई अप्ठ्यारो पार्नुभयो जुन तपाइँ पहिले नै थाह थियो र यसरी तपाईंको अधीनमा लागी अपील गर्दछ। उनको कामले तपाईंलाई प्यासीफाइस्ट मोडमा राख्न र खराबको प्रतिरोध गर्न (र आफ्नो शुभ बैंकमा लगानी गर्न) हो।
अर्को पाठकबाट प्रतिक्रियाबाट एक टुक्रा:
सबै मानिसजाति (मेरो आफैं सहित), केहि अपवादहरूको साथ, अझै पनि तीरहरू खुवाउन व्यस्त छन् र यस संसारको भयानक कायम राख्न। तीरहरू विरुद्धको संघर्ष अनिवार्य रूपमा आन्तरिक संघर्ष हो, आफैमाथि विजय, यो संसारका आर्कैंन्सबाट रिहाई। त्यसपछि मात्र तपाईं यस संसारका अन्य मानिसहरूको स्वतन्त्रताको लागि केहि कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो अब संकटको समय हो। यो भयानक खेल जो खेलिएको छ र मानिसजाति द्वारा कानूनी समाप्ति संग समाप्त हुन्छ। त्यहाँ एक सीमा छ र अहिले लगभग पुग्नुपर्दछ। त्यहाँ नयाँ अवधि, र फेरि र फेरि, र त्यसोभए, जहाँ मानव जाति फेरि एक स्वच्छ स्लेट संग सुरु हुन सक्छ। यद्यपि हरेक मानवले यस डेबैटिकल संसारबाट उनीहरूको गहिरो भनाईबाट मुक्त गर्न सक्षम भएको छ कि मानवजातिले हरेक पटक आफूलाई फेरि एक हड्ताल बन्छ।
यो महिलाले राम्ररी राम्रोसँग रोनाल्ड बर्नार्डको लुइस ट्रस्ट 'भव्य सन्देश' को मूल व्यक्त गरे। यसैले, मानवता एक विश्वास प्रणाली मा प्रलोभित छ जुन पुनर्गठन चक्र मा आधारित छ जसमा हामी अंततः ज्ञान मा पुग्छ र दोश्रोवाद को फेंक दिछन। पुनरुत्थान एक सकारात्मक मिशन हो र होइन कारण-प्रभाव परिणाम कि हामी वास्तव मा मार्फत मार्न चाहानुहुन्छ। यो पनि, एक महान सत्य जाल मा आधारित छ। हो, हामी यो आत्मा जेलमा पुनर्जन्म लाग्न लागेका छौं, तर त्यो 'एक परिणाम'र' नहीं 'बाटो'। प्राण जेल पर्छ जो dualism हामी रूपमा सूर्य मा हिउँ जस्तै भंग गर्दैन तर स्वादिष्ट pacify र तर हामी अन्ततः मार्फत छन् सम्म reincarnating राख्नुहोस्। मेरो विचारमा, यो आविष्कार गरिएको नयाँ धर्म हो जुन स्थितिको विरुद्ध प्रतिरोध तोड्न।
रोनाल्ड बर्नार्डले प्रायः सुनेको बयानमा निर्भर गर्दछ, जसको लागि कुनै पनि पर्याप्तता भेटिएन, अर्थात्: हामी नयाँ युगमा आइपुगेको छ जुन मुक्त व्यक्तिको पुन: सम्मान गरिन्छ। वा माथिको महिलाले भने: यो भयानक खेल जो खेलिएको छ र मानिसजाति द्वारा कानूनी समाप्ति संग समाप्त हुन्छ। त्यहाँ एक सीमा छ र अहिले लगभग पुग्नुपर्दछ। त्यहाँ नयाँ अवधि, र फेरि र फेरि, र त्यसोभए, जहाँ मानव जाति फेरि एक स्वच्छ स्लेट संग सुरु हुन सक्छ। रोनाल्ड बर्नार्ड र तिनका अनुयायीहरूले यस पदको लागि कस्तो वैज्ञानिक अवलोकन गर्छन्? अथवा त्यो केवल एक आध्यात्मिक अवलोकन हो कि केवल केहि "जागो" मान्छे को लागि आरक्षित छ? तपाईंले त्यो चर्चमा पनि प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि केही मानिसहरू पवित्र आत्माले भरिएको थियो; त्यो विशेष थियो। यसबाट transhumanistic बिंदु को दृश्य त्यो पनि सही छ (तल भिडियो को उदाहरण हेर्नुहोस् कि कसरी ट्रांस्मनमेन्सिस्टहरूले फिल्मको अन्तर्गत पढ्न र पढ्नका लागि पढ्नुहोस्)।
"तर के तपाईं वैज्ञानिक प्रमाण मार्टिन व्रिजल्याण्ड हुनुहुन्छ जुन हामी एक आत्मा जेल सिमुलेसनमा बस्छौं भन्ने अवधारणाको लागि?" अब मैले सोचेको छु कि तपाई यसको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ र साइटमा प्रतीकता देखाउनुभएको छ जुन हामी केहि चीजहरू पढ्न सक्छौं र केही प्रसिद्ध ज्ञात क्यारेक्टरहरूको वर्णन देखाउनुहोस् जुन हामी अनुकरणमा बाँच्न सक्छौं। म दृष्य हेर्न चाहन्छु कि यो दृढता जस्तो छ कि हाम्रो प्राणले यो आजीवन अनुकारमा प्रलोभन गरेको छ र हामी जेलमा छौं। मैले अपमानजनक कानुनी नियमहरूको रूपमा अपील गरेन हामी नयाँ युगमा आइपुगेको छ जुन मुक्त व्यक्तिको पुन: सम्मान गरिन्छ। यो केहि चीज हो जसलाई तपाईं कल 'गुरुत्वाकर्षण गरिएको छ'। (भिडियो अन्तर्गत पढ्नुहोस्)
संयोग, ट्रांचुमेमेनम्यानम को समय मा गुरुत्वाकर्षण तथा डिजिटल निर्मित सृजनात्मक ब्रह्माण्ड को रूप मा अब कानून वैध नहीं हुनेछ। भर्चुअल वास्तविकता र निकट भविष्यमा संवर्धित वास्तविकता अब तला धेरै पुरुष खेल भन्दा राम्रो हुन र मस्तिष्क (Elon Musk गरेको तन्त्रिका बेल द्वारा) मा अनुमान गर्न सकिन्छ हुनेछ। यी नयाँ खेलहरू भित्र हामी केही कानुन मेट्न वा परिमार्जन गर्न सक्छौं। त्यसोभए हामी शरीरलाई पखेटाको साथ एक शरीर मान्दछौं र फराकिलो फराकिलो पार्नुहोस्। तर यो ब्रह्माण्ड भित्र हाम्रो प्राणी हाम्रो जैव-अवतार शरीरमा रहेको छ र त्यो शरीर यस ब्रह्माण्डको कानुन भित्रै काम गर्दछ। यस ब्रान्ड भित्र केहि बल खेतहरू लागू गर्दछ जुन हामीलाई सीमित गर्दछ, जस्तै कि गुरुत्वको बल क्षेत्र। त्यहाँ संकेतहरू छ कि हामी गुरुत्वाकर्षणलाई पराजित गर्न सक्दछौं, जस्तै हामी हवाई जहाजको बोर्डिङ गर्दा देख्न सकिन्छ। तथापि, कुनै संकेत छैन कि "मुक्त इच्छा" को समय आइपुग्यो। यसको विपरीत, नि: शुल्क वृद्धि बढ्दै जानेछ र दबाइन्छ।
स्वतन्त्र समयको समय आइपुग्यो; स्वतन्त्र समय समय र यस प्राणी जेलबाट अलग हुनेछ। फ्री हामी जो हो जुन को सार हुनेछ, तर यसको पासिता संग केहि गर्न छैन। को अवधारणा 'तपाईंलाई कुनै अन्य क्षेत्रमा आउन छैन' र आफ्नो आफ्नै बुलबुलामा धेरै सुन्दर लाग्नुपर्दछ, तर ती सबै बयानहरू जुन केहि पनि आधारित छैन। यी अवधारणाहरू छन् जुन हामीले निष्क्रिय रहनु पर्छ र हामीले हामीसँग खतरामा खतरा देख्दैनौं। यो एक नया विश्वास प्रणाली हो, जस्तै कि, 'सबै कुरा गरौं' भन्छन्।
नि: शुल्क हुनेछ हामी जो हो र यो छ एक शक्तिशाली आत्मा जसको उत्पत्ति यस पुनर्जन्म चक्र भन्दा बाहिर छ। हामी यो सिमुलेशनमा कदम चाल्न उत्प्रेरित छौं र हाम्रो आत्मा हो, जस्तै यो, पर्यवेक्षक। प्लेस्टेशनमा खेल प्ले गर्न तुलना गर्नुहोस्, जहाँ तपाइँ तपाइँको स्क्रिनमा लगभग तपाइँको गायकमा हराउनुहुन्छ। तथापि, यो सिमुलेशन धेरै आजीवन छ कि हामी खेल मा कठपुतली संग पहिचान भएको छ। हामी आफैलाई हाम्रो बायोवतार संग पहिचान गर्न आएको छ; हाम्रो शरीर संग। हामी आफैले सिर्जना गरेको वास्तविकताको साथ पहिचान गर्न आएको छ जस्तै हामी यो थाहा छ; यो ब्रह्मांड र यस पृथ्वी। र हो, त्यस खेल भित्र राम्रो र बुराई हो र खेलको गार्डरको पिरामिड जस्तो शक्ति संरचना हो जसले स्क्रिप्ट योजना अनुसार चलाउँछ। तलको भिडियोले तपाईंलाई कसरी अवतार शरीर वा शरीर भागको साथ पहिचान गर्न सक्दछन् भन्ने छापको छाप दिन्छ। (भिडियो अन्तर्गत पढ्नुहोस्)
यो अवधारणाबाट छ कि हामी सिमुलेशनमा बस्छौं कि हामी विश्वास गर्छौं कि त्यहाँ एक नयाँ युग हो जसको नि: शुल्क सम्मान गरिने छ। आखिर, सबै संकेतहरू संकेत गर्दछ कि एक समय आएको छ जब आत्मा आफ्नो नि: शुल्क इच्छाले अगाडी बढाएको छ। हामी transhumanism को समय तिर जान्छौं, जसमा हामी बिस्तारै साइबर्ग्समा बदल्न चाहन्छौं। र यसको अर्थ छ कि हाम्रो आत्मा - जुन यस उत्पत्तिभन्दा बाहिरको उत्पत्ति बिर्सिएको देखिन्छ जस्तो देखिन्छ - एक कदम अगाडी बढाएको छ। त्यो सबै प्रलोभन को एक नै बाटो मा जान्छ, अर्थात् जसमा हामी नयाँ संसार खोज्न सक्छौं र लगभग ईश्वरीय गुणहरू पाउन सक्छौं र त्यो प्रलोभन हामी धार्मिक शास्त्र र उनीहरूको सृजना कथाहरु बाट थाहा पाउँछौं (उत्पत्ति जस्तै).
नि: शुल्क हुनेछ सधैँ सारमा त्यहाँ रहन्छ र त्यहाँ त्यहाँ रहनेछ। त्यसपछि हामी तपाईंको प्राणको स्वतन्त्र इच्छाको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं। तथापि, समस्या यो हो, किनकि प्रलोभन यस खेलमा भाग लिन को लागी मार्ग फिर्ता अवरुद्ध छ। हामीले यस ब्रह्मामा आफैलाई अपलोड गर्न निर्णय गरिसकेका छौं, हाम्रो मूलको सम्पर्क हो, जस्तै यो, फायरवाल। म कल्पना गर्दछु, तथापि, आत्मामा यसको भित्ता समाविष्टता छ। त्यस संचार यो पूर्णतया प्रभावशाली छ र बिच्छेद गर्न सक्दैन। चाँडै हामी जान्दछौं कि हामी सिमुलेशनमा बसिरहेका छौं र यो (यस खेलको बिल्डरले) हामीलाई सुरक्षित गर्न प्रयास गरेको छ, हामी पनि थाहा पाउँछौं कि छोटो कटौती हो।
यहाँ अनुसन्धानबाट साइटमा प्रायः वर्णन गरिएको छ कि बिल्डरले नाम लुसिफरलाई भालु दिन्छ। यस लूक्सफरको लक्ष्य उनको सिमुलेशनमा सम्भवतः धेरै आत्माहरू समावेश गर्न लाग्थ्यो। यो पछिको कारण फेरि पुन: लेखहरूको दायराको लायक छ, तर हामीलाई यस अनुकरणमा ध्यान केन्द्रित गरौं। चाँडै हामी जान्दछौं कि हामी सिमुलेशनमा कैदी छौं, त्यो धेरै दमनकारी हुन सक्छ। सौभाग्यवश, धर्म र आध्यात्मिकताले केही (झूटा) आशा ल्याउँछ। पुरानो समाधान येशू हुनुहुन्थ्यो; नयाँ 'नयाँ टाइम' र प्रकाश को हो। तथापि, समाधान धेरै सरल छ र विज्ञान द्वारा खोजिएको क्वांटम उत्खनन को सिद्धान्तमा छ। हाम्रो प्राणले, वायरलेस रूपमा र बाहिरको संसारको कुनै ढिलाइको रूपमा संचार गर्दछ (यो लूसिफेरियन आत्मा जाल को बाहिर)। यस प्राणिक जेलको कार्यवाही अनभिचार र व्याख्या गरेर, हामी वास्तवमा "संवाददाता बाहिर" सँग कुराकानी गर्दछौं। र त्यस स्थितिबाट यो जेलको कपाललाई उठ्न सुरु हुन सक्छ र फायरवाल खोल्न सकिन्छ।
क्वांटम इन्टान्गोल्युशन क्वांटम म्यानोनिक्समा एक घटना हो जसमा दुई वा बढी भौतिक वस्तुहरू यस प्रकारमा जोडिएको छ कि एक वस्तु अब विशेष रूपमा अन्य रूपमा उल्लेख नभएसम्म पूर्ण रूपमा वर्णन गरिएको हुन सक्दैन - भित्तामा दुई वस्तुहरू स्पैटिक रूपमा विभाजित हुन्छन्।
शक्ति र विचारको डर छ कि जब तपाईं दिनको उज्यालोमा दुष्टता ल्याउनुहुन्छ, तपाईंलाई मृत्यु वा पागल घरको साथ तिर्नु पर्दछ, के यो कलिमोरो अवधारणामा आधारित छ 'तिनीहरू ठूलो र बलियो हुन्छन् र म सानो हुँ।' त्यो बेकार छ। हाम्रो आत्माले यो लुकाफरियन बुलबुला भन्दा बाहिरको अधिक प्राधिकारीसँग अरु कसैको रूपमा छ। मृत्यु वा म्यानमहाउसको डरले हामीलाई निष्क्रिय मोडमा राख्नुपर्दछ। मेरो विचारमा, उनीहरूको नाम र गैर-अनुपालन गर्न शक्ति संरचनाहरू उजागर गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यो चेतनाबाट सबै कि तपाईंको प्राण खेलमा छ। यसकारण तपाईं मृत्यु भन्दा अघि (डरलाग्दो) डर पनि डर लाग्न सक्नुहुन्छ। क्वांटम इन्ट्यागमेन्टले अन्ततः काम गर्नेछ।
ट्याग: 5, de, डील, विशेष, रोनाल्ड बर्नार्ड, भिडियो, free, wil
23 मार्च 2018 मा 17: 01
के यो 'पुनरुत्थान' (शरीर मा फेरि बाँच्न को लागी) के हो? आत्मा कहाँ शरीरमा अवस्थित छ? क्रिसनाको सिद्धान्तले भन्छ कि आत्मा हृदयमा रहन्छ। तर यो मापन गर्न सकिदैन, किनभने आत्मा केहि भौतिक छैन। वा यो शरीरमा छैन, तर यो यसको साथ जोडिएको छ? मेरो ज्ञान पछि, लुसिफर एक स्टार (शुक्र), फ्रीमेमेन्स जस्तै अलबर्ट पाइक हो र उनीहरु संग धेरै दर्शकहरु लाई सिकाउँछन् कि लुसिफर (मार्स्ट स्टारको लैटिन अनुवाद) शैतानलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन र यो होइन। Gnostic स्कूलहरु र लुसिफेरियन परम्परा को पछि दर्शन बाइबल / कुरान को बाइबिल निर्माता (जो दुष्ट देवता र क्षण को रूप मा वर्णन गरिएको छ) लाई पराजित गर्न को लागी हो र आफु को देवता बनें। भ्यान निमोड्रोलाई शक्तिशाली (विशाल) भनिन्छ जुन बाइबलको सृष्टिकर्ताको विरोध थियो। क्रिसनाको सिद्धान्त पनि भन्छ कि भौतिक अस्तित्वको उद्देश्य उहाँको राज्यमा फर्कन र फेरि फेरि अवतार गर्न कहिल्यै सङ्कलन गर्न हो।
म तिनीहरूसँग मार्न को लागी इरादा छ भने यदि उनीहरूलाई आफैंको रक्षा गर्न (हत्यारा) को अधिकार छ भनेर राख्दछु। असल र दुष्टबीचको युद्ध पृथ्वीमा अवस्थित हुनेछ जब सम्म लुकाफिरीहरूको शासन अन्त्य हुनेछ।
23 मार्च 2018 मा 17: 38
मेरो अनुसन्धान अझै सम्म यो तारा शनिको रूपमा संकेत गर्दछ। खोजी क्षेत्रमा त्यो शब्द प्रविष्टि गर्नुहोस्।
लुसिफर बाइबिलको ईश्वर होइन र बाइबलको शैतान होइन। वास्तवमा, धर्म सत्य र विरूपणका भागहरूमा आधारित छ। त्यो, मेरो विचारमा, सबै धर्महरूमा लागू हुन्छ, जसमा हिन्दू धर्मको पनि शामिल छ।
तपाईं सत्यलाई यो ट्रेस गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि तपाईं समाचारहरू पालन गर्न सक्नुहुन्छ र सत्यको यो निशान पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ (ज्ञानमा जुन सामान्यतया झूठ बोल्ने र प्रचार उद्देश्यका लागि विकृत भएको छ) तपाईलाई केहि प्रयास गर्नु पर्छ र अन्धा छैन मानौं।
25 मार्च 2018 मा 08: 51
मेरो अनुसन्धान अनुसार, लुसिफर (बिहान बिहान तारा यीशु) को वरिपरि वरिपरिका रोचक दर्शनको दर्शन हुन्छ। र त्यो साटन शनि संग सम्बन्धित हुन सक्छ। राक्षसहरूको पछि लागेका व्यक्तिहरूका आत्माहरू जसले अभिजात वर्ग पछि लुकेको छ।
23 मार्च 2018 मा 17: 29
त्यो नयाँ संसारको आदेशको उद्देश्यले पृथ्वीमा बाइबलको सृष्टिकर्ताको स्मृतिलाई ध्वस्त पार्दछ। द नेसोसेलिक सोसायटी को एलिस बेली को अनुसार, पनि ईसाई धर्म को मान्छे को दिमाग देखि बर्बाद हुनु पर्छ। यद्यपि ईसाई धर्म निश्चित रूपमा 90% को लागि भ्रामक सिद्धान्तहरूमा आधारित छ, ऐलिस बेली को विचार थियो कि ईसाई धर्म अझै पनि पुरानो नियमको लागी धेरै अधिक हुन सक्छ। यसैले मेरो म्यान्न्ग्ग्ग, कि यदि तिनीहरूले मेरो लागि शिकार गरेमा, म येशूको रूपमा काम गर्दैन (मृतक भेडाको रूपमा हत्या गर्ने काम गरिनँ)। मैले हत्या गरेको छु।
24 मार्च 2018 मा 11: 35
यस प्राणीको सृजनाक / बिल्डर लूसीफर हो। ब्रह्माण्ड जसलाई हामीले थाहा छ यो एक सिर्जना गरिएको झूटो वास्तविकता हो: एक सिमुलेशन।
यदि हामी पहिले नै कैद भएमा सबै दुष्टहरू किन? यही कारणले आत्मालाई सधैं स्वतन्त्र छनौट छ र यसैले दुष्टले हामीलाई हाम्रो आत्मालाई देवतालाई (जसले हामीलाई त्यस दुष्टबाट बचाउनेछ) को प्रतिज्ञा गर्न समझाएको छ। त्यो देवता कसलाई विश्वास छ? लुइस ट्रस्ट र वेटिकन लुसिफर
24 मार्च 2018 मा 15: 08
अजीब छ कि मान्छे, जो आफूलाई जागृत गर्छन, यस गैर-लुगा cookware डीलरको सुचारू कुराद्वारा निर्देशित गरिन्छ। पहिलो भिडियोमा, उनले पहिले नै आफ्नो सजिलो कुराकानीको साथ टोकरीमा खसे। केवल कल्पना गर्न प्रयास गर्नुहोस् कि तपाईं सही ठाँउमा हुनुहुन्छ र यी फ्यानहरू बेच्न सक्नुहुन्छ, तर सोच्नुहोस् कि तपाईं2भनिने चलचित्र बनाउन मौका पाउनुहुनेछ।
घोडामा कुनै सेतो राजकुमार छैन, तपाईंले अन्ततः सबै कुरालाई ठीक पार्नु हुनेछ। जिब्रो हुनुहोस्, आफ्नै बाटोमा रहनुहोस् र तपाईंको भावना बोल्न दिनुहोस्!
24 मार्च 2018 मा 17: 21
24 मार्च 2018 मा 21: 13
युद्धले मानिसलाई कहिल्यै समाप्त पारेको छैन
24 मार्च 2018 मा 21: 41
Solipsism satanism को स्तम्भ मध्ये एक हो। (= अहंकार)
हो, हामी सिमुलेशनमा बस्छौं, किनभने हाम्रो मूल चेतना छ। हामी अनुमान लगाउने गल्ती गर्छौं कि हाम्रो मूल भौतिक संसारमा छ।
विचार धेरै सरल छ, अनुपयुक्त, तर धेरै उपयुक्त छ र धेरै चीजहरू वर्णन गरेका छन् कि विज्ञानले बच्चाको रूपमा सरल रूपमा पुग्न सक्दैन।
Bernardo Kastrup यसो भन्छ:
हामी AI बाट डराउनु हुँदैन वा हामी रोबोटमा आफैलाई अपलोड गर्न सक्षम छौं; मात्र होइन किनकि हामी वास्तविकताको अनुभव गर्दछौं वास्तवमा चेतनाको सपना भन्दा बढी। (हाम्रो सृष्टिकर्ता / ईश्वरबाट?) यो एक धेरै अजीब सम्भावना यो हो कि हामी सबैले पनि 'म' पनि महसुस गर्दछौं। म एक चेतना को रूप मा यो एक डिस्को बलमा छ र हाम्रो जीवन अनुभव को हरेक एक डिस्को बलमा एक दर्पण हो, उनि थाहा छैन कि उनि त्यहाँ छन्, उनि एकअर्का 'हेर्न सक्दैन', तर तिनीहरू पनि 1 हुन्।
24 मार्च 2018 मा 22: 09
एआई, के यो सिमुलेशन पहिले देखि नै यसको निर्माणबाट चलाउछ र एआई हाम्रो दिमाग पनि मस्तिष्क लिंक को माध्यम ले अधिक आवेग प्रदान गर्न को लागी छ, ताकि हामी पनि एआई मा गहिरो सिंक र पनि सम्झना मुश्किल हो कि हामी वास्तव मा हो।
24 मार्च 2018 मा 22: 49
सृष्टिकर्ताको 'ईश्वरीय अनुकरण', जुन एक भौतिक वास्तविकताको हाम्रो अनुभव आधारित छ, म प्राकृतिक खुसी महसुस गर्नेछु, होइन कृत्रिम बुद्धि। यो ठीक छ किनकि हामीले शारीरिक संसारमा आमा प्रकृतिबाट एअर बनाउन वा प्रतिलिपि गर्न सक्दैनौँ।
मुस्किल भ्रष्टाचारबाट बाहिर आउन सम्भव छैन किनभने तिनीहरूसँग वास्तविकताको सही बुझाइ छैन जसमा हामी जिउँदछौं। आदर्शवाद, सार चेतना हो कि विचार, हामी एक भौतिक संसारमा बस्छ भन्दा धेरै तार्किक छ।
आफ्नो सामान्य तथ्यको साथ आफ्नो आफ्नै तुलना तुलना गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो परिप्रेक्ष्य, समय, क्यारेक्टर आदि को सपना देखाउन सक्नुहुनेछ जस्तै सृजनाकारले आफ्नो सपना (उच्च स्तरमा) मा7बिलियन गुड़िया / व्यक्तिहरुलाई गर्न सक्दछ। धेरै धार्मिक विषयहरू जस्तै हामी परमेश्वरको छविमा सिर्जना गरिएका छौं र धेरैले अचानक यस संसारमा हेर्दै गर्दा अचानक केही हडताल गर्छ।
यो सबै अन्य मान्छे हामी अनुभव गर्नेछन् कि कुनै चेतना अहंकार अहंकार चाल र एक पुरा तरिकाले गलत (अहंकार) निष्कर्ष हो कि हामी एक सिमुलेशन मा रहछन या जीवन, साझा भौतिक दुनिया एक सिमुलेशन मा रहयो छ।
यो बर्नार्डो ए ए ए विशेषज्ञको रूपमा काम गर्दैछ र उहाँले स्पष्ट विचार पाएको छ कि उहाँले देख्नुभयो कि एक पर्यवेक्षक (चेतना) लाई सधैं आवश्यक छ जसमा बुद्धिको सार हुन्छ। र त्यो भौतिक संसारमा कहिल्यै बनाइएन। त्यो साँचो कृत्रिम बुद्धि सम्भव छैन।
संयोगवश, म धार्मिक माटोमा भइरहेको छैन र मलाई यहाँ भाषा-आक्रमणको लागी माफी माफी चाहन्छु, तर मेरो लागि यो राम्रो शब्द छैन।
24 मार्च 2018 मा 23: 02
'सृष्टिकर्ता' को धारणाले यस सिमुलेशनको बिल्डर '(फ्रिमेनेसोरीको मास्टर बिल्डर) भन्दा बढी कुरा गर्दैन। उहाँले आफैले ईश्वरलाई बोलाउनु भयो।
त्यो एअर प्रेरणा बिना काम गर्न सक्दैन किनकि आत्माले यो आत्माको आत्माले अहिलेको जैव-अवतार-मस्तिष्कलाई इन्टरनेटमा लिंक गर्नु पर्छ।
त्यसैले एन Musk तर्क को रूप मा मानवता को लागि सबै भन्दा ठूलो खतरा होइन, तर एलोन Musk हामीलाई हाम्रो मस्तिष्क इन्टरनेट मा फांसी गर्न को लागी समझा पर्छ ताकि एअर हाम्रो प्राण को टैप गर्न सक्छ। त्यो लुसीफरियन सिमुलेशनको अन्तिम लक्ष्य थियो जसमा हामी बस्ने छौं। धर्मको माध्यमबाट हामीले पहिले नै हाम्रो आत्मा लुकाफर (जसले बाइबिल, कुरान, ईश्वरको पछि लागेछ) र विश्वव्यापी वेब मार्फत यो पनि बढी परिष्कृत छ।
तंत्रिका लेस (मस्तिष्क उपरिशायी) को हाम्रो प्रेरणाको लागी नजिकको रूपमा आउन र यसलाई प्रयोग गर्न को लागी एआई को लागी आउँदछ। एअर को सार मा प्लग गर्न चाहन्छ जो हामी वास्तव मा हो: धेरै क्षमता संग आत्मा सिर्जना।
लुसिफरले यो प्राणी जेल सिमुलेशनलाई मात्र 1 लक्ष्यको साथ बनाएको छ: हाम्रो आत्मालाई एकसाथ बन्डल गर्नुहोस् र उनीहरूलाई एआईमा जोड्नुहोस्, ताकि उनीहरूले वास्तविक तहमा शक्तिको पालना लिन सक्दछ (यो सिमुलेसन बाहिर)। तर यो वास्तवमा यो जागरण यात्रामा नयाँ अध्याय हो।
24 मार्च 2018 मा 22: 17
डिस्को बबलको साथमा मैले मिरर बलमा भनेको हुँ जस्तो कि तपाईंले देख्नुभएको / डिस्कोमा हेरेको छ।
दिमाग हामीले के सोच्ने मात्र एक भौतिक प्रतिनिधित्व हो; त्यहाँ व्यक्तिहरू छन्, एक दुर्घटनाको कारण, वास्तवमा कुनै मस्तिष्क बायाँ छैन र जीवन छ, काम गर्ने दिमाग छ।
तपाईंको चेतना तपाईंको टाउकोमा होइन; तपाईंको टाउको (र बाँकी 'भौतिक' संसार) तपाईंको (तपाईंको) चेतनामा अवस्थित छ।
यसले मलाई यो महिना कल्पना गर्न लगायो, तर त्यसपछि पहेलीको सबै टुक्राहरू बिग्रियो।
24 मार्च 2018 मा 22: 39
तपाईंको बायो-अवतार कम्प्युटरको प्रोसेसरको रूपमा मस्तिष्कलाई विचार गर्नुहोस्।
हामी हो, जस्तै थिए, सिंथेटिक जैव-कम्प्यूटर जसको आत्मा आत्मा arranger छ।
यदि तपाइँ अहिले प्लेस्टेशन ps4 मा खेल खेल्नुहुन्छ भने तपाईले एक फ्लैट 2D स्क्रिनमा अर्को कुञ्जीपाटी देख्नुहुनेछ। हाम्रो आत्मा अब यो खेल फ्लैट स्क्रिनमा हेर्ने छैन, तर यो खेलमा छ, गुडियामा। मस्तिष्क केवल जैव-अवतार को सीमित मध्य प्रोसेसर हो।
तपाई को वास्तव मा आत्मा हो। चाँडै तपाईंले आफैलाई त्यो परिप्रेक्ष्यलाई हेर्दा, जागरूकता तपाईं को हुनुहुन्छ भनेर फिर्ता आउन थाले।
तपाईं न त तपाईंको शरीर हो र न त तपाईंको विचार न त तपाईंको धारणा र अनुभव हो। तपाईं आत्मा हुनुहुन्छ र यो एक आयाममा (यो सिमुलेशन) मा छ र आंशिक रूपमा यसको मौलिकमा। त्यहाँ वास्तवमा कुनै भागहरू छैनन्। तपाईंको आत्मा 1 हो, भले यो यसको मूलबाट विभाजित बन्द देखिन्छ। क्वांटम इन्टिग्रेशनले यहाँको भूमिका खेल्छ।
24 मार्च 2018 मा 22: 52
न त जीवविज्ञान न त भौतिक वास्तवमा अवस्थित छ। यदि तपाई माइक्रोस्कोप भित्र सेल राख्नुहुन्छ र तपाईलाई अधिक जोजमा जूम गर्नुहुन्छ, त्यसपछि सबै केहि कम्पन वा सूचना प्याकेज भन्दा बढी छैन। यसैले यो सम्पूर्ण भौतिक ब्रह्माण्ड एक सूचना प्याकेज भन्दा बढी छैन। यो एक नराम्रो ठुलो लग रहेको छ र टिकाऊ भावना सिमुलेशन हो। हामी खेलकुदहरू मार्फत बढ्दो वास्तविकताको रूपमा अझ बढी बुझ्न जाँदै हुनुहुन्छ। बढ्दो "सार्थक" बन्छ।
हाम्रो शरीर वा बायोवतार आत्माको अवलोकन भन्दा बढी छैन। यो पनि सबै केहि लागू हुन्छ कि जैव-अवतारको मस्तिष्क सोचिरहेको छ।
एक PS4 (प्लेस्टेशन) खेलमा तपाईं नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ र तपाइँ स्क्रिनमा कुञ्जीपाटी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। यस खेलमा तपाईंको आत्मा बटनहरूमा पनि छ; कम्तीमा हामी लगभग बिर्सिएका छौं कि यो हो किनकि हामी प्रोग्रामिंग द्वारा हाम्रो मुख्य चेतना (हाम्रो दिमाग चेतना) मा धक्का दिइन्छ। यद्यपि आत्मा आत्मामा हुनुहुन्छ। यो बायो-अवतारको मस्तिष्कले आफ्नै छनौट गर्न प्रोग्रामिंग द्वारा झुकाएको छ। हाम्रो जैव-अवतार छ, जस्तै यो थियो, एक पूर्व-प्रोग्राम गरिएको आफ्नै इच्छा। कम्प्यूटर अपरेटिङ सिस्टम जस्तो बिर्सनुहोस्। तपाईंको पीसी विन्डोज ओएस वा म्याक ओएसमा चल्छ। तपाईंको शरीर लुसिफर ओएसमा चल्छ, त्यसो कि यो एकदम गाह्रो छ, किनकि यो ज्योतिषीय पूर्व-प्रोग्रामिंग साँच्चै खुल्ला स्रोत र छोटो सानो आत्मा इनपुट छैन। चाल यसको बारे मा जान्दछ, ताकि क्वांटम समाविष्कार को माध्यम ले काम गर्न सक्छ र तपाईंको आत्मा तपाईंको जैव-अवतार मा अधिक नियंत्रण हुन्छ।
25 मार्च 2018 मा 20: 29
म अझै आत्मा को ठीक देखि बाहिर नहीं हूँ।
यसबाहेक, म लगभग तपाईं संग सहमत छु यदि तपाईं 'चेतना' संग 'मस्तिष्क' को ठाँउ हुनेछ किनभने यसको मतलब तपाईं भौतिक वास्तविकताको कारण हो।
यो वैज्ञानिक रूपमा देखाइएको छ कि हाम्रो चेतना हाम्रो शरीर बाहिर छ। http://www.superconsciousness.com/topics/science/why-consciousness-not-brain तपाईंले यो आध्यात्मिक संसारलाई बोलाउन सक्नुहुनेछ, तर म बरु यो गरिनँ किनकि यसको बारेमा धेरै बोझ छ।
एक निश्चित कुरा हो कि हामी ती चेतना र 'संसार' को बारे मा निश्चित कुरा को बारे मा केहि नहीं ठेगाना हुनेछ या जहां 'छ' हो।
मैले पहिले नै 'गल्तीहरू' लाई शब्दहरू संसार प्रयोग गरेर बनाइरहेको छु, किनभने यी चीजहरू जुन हाम्रो भौतिक अनुभवमा मात्र अर्थ छ वा मेरो भौतिक अनुभवमा आधारित आधार छ।
यो कुरा धेरै गाह्रो छ परे, यो तपाईं केही यो बारेमा थप जान्न सक्षम हुनेछ भन्ने थाह किनभने अवधारणा थप अध्ययन गर्न साना अर्थमा छ भन्दा र यदि यो सकिनँ, यो आफ्नो जीवन प्रभावित हुने छैन बढि छ, तपाईसँग शारीरिक अनुभव छ।
"यो जैव-अवतारको मस्तिष्क प्रोग्रामिंग मार्फत आफ्नै छनौट गर्न इच्छुक छ।" मलाई यो संदिग्ध छ कि यो केहि फरक छ, तर सम्भवतः यो केवल टर्मिनोलोजि हो कि फरक छ।
सचेतना (1!) एक ब्रह्माण्ड (1 गीत) को माध्यम ले आफैलाई खोज्छ। यसले आफनो द्विवादको माध्यमबाट आफैलाई पत्ता लगाउन सक्छ र आफैले हेर्छ।
राम्रो र खराब सम्बन्धी अवधारणाहरू छन् र हाम्रा अनुभवहरू पनि हुन्। (जो मान्छेहरु लाई केहि पनि अनुभव नहीं गरेको छ को लागि, शक्ति को बिना एक दिन पहिले देखि नै एक प्रमुख आपदा, घाटी बिना चोटहरु आदि)
तर चूंकि हामीले मानिस र सम्बद्ध परिप्रेक्ष्यको अनुभव गरेका छौं, अचानक त्यहाँ राम्ररी राम्रो (भगवान?) र केहि (बु) बोल्दै केहि कुरा हो। (केही राम्रो छ भने सबैको लागि राम्रो छ।)
मेरो लागि यो हामी अहम् को प्रलोभन (Satanism) विरुद्ध (हामी पनि राम्रो हाम्रो हृदय महसुस गर्न सक्नुहुन्छ) थाहा राम्रो (परमेश्वर) के हाम्रो गहिरो संग आन्तरिक युद्धमा सञ्चालन अर्थ जो केवल एक 'कार्यक्रम' (आवश्यक दुष्ट?) दिमागको भौतिक संसारको अनुभवको लागि आवश्यक छ।
यसकारण हामीसँग वास्तवमा संसार छ जुन हामीले योग्य छौं र यो हाम्रो छनौट हो (सामूहिक / चेतनाको नि: शुल्क हुनेछ) कि हामी स्वर्गमा स्वर्ग वा नरक बनाउँछौं। यस अर्थमा हामी आफ्नै (सामूहिक) संसार सिर्जना गर्दछौं र सबैलाई थाहा छ सबैजना (एक / एक्सएनएमएक्स चेतना), विश्वमा खराब हुनेछ भन्ने कुरा कम भयो। तर हाम्रो वास्तविकतामा सबैले सन्तुलनको लागि प्रयास गर्दा हामी पृथ्वीमा पूर्ण स्वर्ग वा नरक सिर्जना गर्न सक्नेछैनौं, यद्यपि हामी यो समयमा नरक तिर जाँदै छौ।
तर फिर्ता AI मा; यो पनि डर नगर्नुहोस्; बुद्धि (चेतना) यो भौतिक संसारमा स्थित अनुभव को रिसीभर (अवलोकनकर्ताले) र छैन देखि, भौतिक वास्तविकता हामी अनुभव सिर्जना र कल गर्न सक्दैन।
क्रिप्टो आरआईएफ लेखे:
25 मार्च 2018 मा 17: 38
ज्ञात छ, केहि रूपमा केहि पनि अवस्थित छैन। हामी आत्मा संग आत्मा संग 'वाहन' को कप्तान को रूप मा हामी शरीर को बुलाया हो। मलाई लाग्छ कि वर्दी शब्द राम्रो छ किनकि हामीले एकपटक यसलाई आकर्षित गरेका छौं र अर्को समय आउँदैछ, तपाईलाई अर्को आयाम (आत्माको जीवन चरण) मा जाने वर्दीलाई लिनु पर्छ। पुनर्जन्मको रूपमा होइन।
जे नियमित रूपमा एक सास मा म्याच र बाइबल / कुरानलाई उल्लेख गर्दछ र यो नियन्त्रण विरोधको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
सबैसँग एक सुरुवात र अन्तिम गन्तव्य छ। तिम्रो आत्मा कहाँबाट आयो? यो कसरी (सँधै) सुरु भएको छ। म मान्दछु कि तपाईं हबर्डको बहुमूल्य सिद्धान्त वा वैज्ञानिकलाई मान्नुहुन्न।
म तिम्रो 'उत्पत्ति' को बारे मा वास्तव मा उत्सुक हूँ। या सबै संयोग छ?
जहाँ राम्रो छ सबै कुरा अन्त मा संतुलित छ। यदि तपाइँ सँग मेल र उनको जुनून छ भने नियन्त्रण गर्न चाहानुहुन्छ वा हामीलाई फ्याँकिएको छ। तपाई के सोच्नुहुन्छ तपाईंको विरोध र उत्प्रेरक?
र श्री बर्नर (अकेला नाम) को लागी, कि धोखाधडी मात्र एक अभिनेता वा एक सहयोगी हो जसले हामीलाई विचलित र आश्वस्त गर्नुपर्छ
25 मार्च 2018 मा 18: 38
राम्रो प्रश्नहरू। निश्चय संग जवाफ सक्षम हुन तपाईं लगभग deity एक प्रकारको (जो म impute छैन) हुनुपर्छ। म मेरो अझै पनि आदि channeling मा तर आफ्नो पछि अनुसन्धान मा आफ्नो पहिलो अध्ययन उहाँलाई Sway एउटा सानो देखिन्छ जो वेस Penre, को पछि काम गर्न कडा दृश्यमा गर्छन यो सबै हदसम्म भ्रामक छ कि भेट्टाउनुहुन्छ।
वास्तवमा, यसको मतलब यो हो कि लुसिफरले, जस्तै कि थिए, मूलको एक प्रतिलिपि बनाइयो र धार्मिक लेखहरू उत्पत्तिको रूपमा यो पनि डेरिभेटिभ हुन्।
यो छोटो रूपमा जान्छ कि किताबमा जानकारी संक्षेपमा संक्षेप गर्न (पढ्नुहोस्: उनको खोजीको रिपोर्ट)।
वास्तवमा, यस सिद्धान्तको अनुसार, लूसिफरले सत्ताको चासो लिन चाहानुहुन्छ र उनीहरूको लागि एक आत्मा सेना चाहिन्छ। यसैले हामीले ट्राफुमेन्टमेन्ट गर्न आवश्यक छ। हामी जस्तै हुनुपर्छ, लुसिफरियन कृत्रिम बुद्धि संग मर्ज गर्नुहोस्।
मूल तहमा वास्तवमा एक देवता / सिर्जनाकर्ता वा उत्पत्ति ऊर्जा हो। लुसिफर एक विद्रोही बन्दूक हो। यो बाइबल कथासँग धेरै नै छ, तर धेरै तरिकामा पनि फरक छ।
म वास्प पेनरको अघिल्लो कार्यहरू धेरै सिफारिश गर्दैन किनभने यी एन्रोम पुस्तकहरू छन् र उनी (जस्तै तिनले पछि फेला पारे) अझै पनि गलत ट्रयाकमा छ। और केहि मामलाहरुमा म उनसंग सहमत नहीं हूँ।
केवल आफ्नो अन्तिम काममा पेनी राम्रो लाग्न लाग्दछ र उहाँले ती सबै च्यानलहरु, आदि को माध्यम ले पनि चाँच्नु हुन्छ। त्यसपछि मात्र त्यो एक दृष्टि संग आउछ कि म अधिक मात्रा मा संग कनेक्ट गर्दछ।
म बुझ्न योग्य लेख बनाउन एक पटक प्रयास गर्नेछु।
अन्ततः सबै चीज एक प्रकारको "विश्वास प्रणाली" मा आधारित रहन्छ, किनकि कडा फोन्सिसिक प्रमाण यस आयामबाट लगभग असम्भव बनाइन्छ। यद्यपि पेनरेले विस्तृत जानकारी दिए। र जब यो आफ्नो विचारहरु को लागी पनि, म एक धेरै नै महत्वपूर्ण आँख संग देख को सिफारिश।
28 मार्च 2018 मा 12: 55
त्यहाँ पर्याप्त संख्याहरू छन् जसले आफैलाई एक देवता भन्छ, त्यसैले तपाईंलाई चाहिन्छ भने। त्यहाँ झूटा अगमवक्ताहरूको कमी छैन। मैले श्री वेस् पेन मा केहि अनुसन्धान गरे। आफ्नो जैवबाट यो देखिन्छ कि यो एक पुरानो चट्टान हो, ड्रग्समा हराएको र पिउने, एक गोप्य समाजको एक पूर्व सदस्य, कि क्लबको उच्च सदस्य, के गरे / कालो जादू गर्दछ। र यसैले जवाफ प्राप्त गर्दछन्, र गुप्त समाजसँग सबै धर्महरूको नाक र होंठका बीच तुलना गर्दछ वा उसले वर्णन गर्दछ:
... र मैले त्यो गोप्य समाजमा त्यो वर्षको अन्त्य सम्मको सर्वोच्च पद थियो। म मेरो बाटो माथि धेरै जादुई सामाग्री र धेरै धेरै जादुई अभ्यास अभ्यास। म रिमोट दृश्यमा सक्षम थिए, र मेरो समाजमा अभ्यास गरिएको "अनुष्ठान" को कारण केहि असाधारण विघटन शक्ति थियो।
जब सम्म म सबै भन्दा माथि (वा अफिसियल "शीर्ष") सम्म पुग्दिनँ, मैले यो कुरा गरिसकेपछि केहि गलत थियो। केहि सही छैन, यद्यपि मैले यति धेरै "शक्तिशाली" र "प्रबुद्ध" महसुस गरे, र आध्यात्मिक स्तरमा जीवनको बारेमा केहि प्रश्नहरू पाएको थियो र शारीरिक। समाजले हामीलाई यसका अलावा अरू कुनै धर्म वा दर्शनहरू अध्ययन गर्न नचाह्यो। यदि तपाईंले गर्नुभयो भने, तपाईं ईमानदार भई र सहि तरिकाले सुधार गर्नुहुनेछ। यसको लागि दिइएको कारण यो थियो कि यदि तपाईं विभिन्न दर्शनहरू मिलाउनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो बाटो गुमाउनु भयो र उलझन पाउनुभयो। जस्तै कुनै पनि धर्मको साथ, THAT को विशिष्ट गोप्य समाज एक मात्र प्रासंगिक जवाफ थियो।
यो पेनर एक लेखक जकरिया सिचिनको कामको प्रयोग गर्दछ! जसले उज्यालो देख्यो र मानिसजातिलाई व्याख्या गर्न हामी कहाँबाट आयो। यो Sumerian मिट्टी ट्याब्लेटहरूको उनको मात्र सही व्याख्याको कारणले। हामी विदेशी सैनिक नागरिक Anunnaki को एक प्रयोग हो! कच्चा माल र विशेष सुनको कारणले, पृथ्वीलाई लुटिएको छ र बन्दरहरू डीएनए अनुकूलन गरेर मानवमा बनाइयो।
म यसलाई आफ्नो होल्यान्डच मा भन्नेछु। मलाई लाग्छ तपाईं यस विषयमा बढी परिचित हुनुहुन्छ ...
त्यसोभए हामी यो जकरिया को पेनरे शिक्षकको रुपमा देख्न सक्छौं। उनको थीसिसको आधारमा पेनरेले पृथ्वी र मानवताको उत्पत्तिको बारेमा एक सिद्धान्त विकास गरेका छन्। तपाईं राम्ररी विस्तृत अनुसन्धानको बारेमा बोल्दै हुनुहुन्छ। उनको कथा मलाई फिल्म थोर र तिनको बुद्धिमान तर बुबा भाइ लोकीको सम्झना दिलाउँछ।
यद्यपि, मैले अझै पनि मेरो सन्देश माथि सोचेको प्रश्नको जवाफ छुट्याउँछु। यो सबैको सुरुवात, र म मात्र पृथ्वी मात्र होइन। म सबै आयाम, प्राणी, ऊर्जाको बारेमा कुरा गर्दैछु! तपाईको आत्मा कहाँबाट आउछ भन्ने लाग्छ? र यो सबै कसरी उत्पन्न भयो?
यदि म कथाको लागि पेनरको तर्क पालन गर्दछु (सम्भवतः, मलाई विश्वास छैन!)। यी अनुननाकी कहाँ छ, यो आमा ईश्वर र उनको पति उनको छोराछोरीबाट आउछन् (1tje लुकाफर)? कसले बनाएको हो? तिनीहरू सधैं त्यहाँ छन्? सबै पेनर अनुसार एक देवता हुन सक्छ। त्यसो त मुख्य ईश्वर हो, वा यो अहिले अवस्थित छैन?
त्यसपछि मैले पेनरी वेबसाइटमा एक जना लियो जोगीमीलाई भेट्न पनि सकिनँ। यो सज्जन पनि freemasons को उच्चतम सर्कलबाट पनि आउँछ, एक सफल सङ्गीत कलाकार जसले सबै कुराको पनि दावा गर्छन्। तर यसको लागि कुनै प्रमाण प्रदान गर्दैन। तिनीहरू सबै एक गोप्य समाजबाट आउँछन् र हामीलाई चेतावनी दिन चाहन्छन्। हाम्रो साथी बर्नार्ड, बैंकर जस्तो बिर्सन्छ!
म तपाईंको बुझ्न योग्य लेखको लागि पर्खिरहेको छु ...
29 मार्च 2018 मा 10: 26
यो ज्ञान वास्तवमा उहाँले पनि Zitchin को सिद्धान्त आलोचना कि टिप्पण, वेस Penre बारेमा आवश्यक प्रश्न ल्याउन गर्छ र यो उहाँले गलत निष्कर्ष ड्र भन्छन्। म साँच्चै थाहा थिएन कि स्वीकार गर्नुपर्छ र भन्ने विषयमा फरक प्रकाश casts। यो कम्तिमा पनि उल्लेखनीय (र शंकास्पद) यस्तो व्यक्ति त Masonic रूख मा उच्च भएको छ।
भनिन्छ कि, यो स्पष्ट हुनुपर्छ कि मेरो उत्पत्ति कस्तो देखिन्छ जस्तो निश्चित छैन भन्न सक्दैन। मैले सबैलाई लेखेँ जुन मैले सकेसम्म साइटमा खोज्छु।
रोनाल्ड बर्नार्डसँग तुलना हुन सक्छ त्यस्तो खराब कुरा। मेरो संदेह भन्छन् कि बर्नार्ड पनि एक मिशन मा ईंट्रीरर छ। बिन्दु भनेको छ कि तिनीहरू प्रायः वास्तवमा डिस्फोको साथ धेरै सत्य मिल्दछ।
25 मार्च 2018 मा 20: 45
26 मार्च 2018 मा 10: 19
श्रीमान (आर) नर्ड एक निश्चित श्री कोलिजको तुलनामा हुन सक्छ;
के हामी अझै पनि थाहा छ?
तपाईं शान्तिपूर्वक सुत्न जानुहुन्छ, सरकारले तपाईंलाई हेरिरहेको छ। "
ओम पनि हेर्नुहोस् https://www.leuk.nl/leuk/0110_basisPagina.php?archief=1&itemId=1651&catId=35 वा गुगल आफैलाई।
म्यानियर बेनर्डले हामीलाई "बैठा बतख" बनाउन चाहन्छ। मूर्ख मृदु लाल सेना बलियोसित गर्दा जो pacifist लाश, भनिन्छ ( "लाल सेना" को बिच्छी जस्तै चिन्ह अन्तर्गत हेर्न Juri लीना।) चुपचाप (Gulag / वाडेन) गर्न दृश्य -to चुपचाप वरिपरि त्यहाँ हटाउन सकिँदैन शिविरमा हटाइयो - हत्या गर्न सक्षम हुन। किन? केवल किनभने हामी [ते] धेरै सँगै छौं वा तिनीहरू किन मात्र घृणा गर्छन आफैलाई घृणा गर्दछु। तपाईंलाई गोयम थाहा छ।
म भन्न सक्दिन (म्यानिरेयर बिरोइन रर्डर्डको अलावा): "ब्यूँझनुहोस् मानिसहरू, उठाउँदै ..."
Ps यदि कसैले मेरो औंलाहरूमा खडा गर्छ भने, म तपाईंलाई दयालु रूपमा सोध्नेछु।
यदि त्यो व्यक्ति रोकिन्छ भने, म फेरि सोध्नेछु, तर थोडा सोध्नुहोस्। यद्यपि, यदि उहाँ पछि उभिरहनुभएको छ भने, म साँच्चै उसलाई तिनको शिरको लागि राम दिनेछु! तयार छ! संसार धेरै दु: खी छ, यो अरूको लागि बोल्न अनुमति छैन, तर यसले मेरो संसार एकअर्कालाई बनाउँछ।
26 मार्च 2018 मा 10: 28
राम्रो तरिकाले मलाई थाहा छ कि कसैले कसैलाई भन्दा धेरै ठूलो र बलियो बनाएको छ कि कसैलाई बेच्न गाह्रो छ, र वास्तवमा आफुको लागि सेना र पुलिस पछि वा अझ राम्रो (कुलीन (sic) को लागी, र लगभग असम्भव देखिन्छ, तर एक जनाले यसो भन्छ: "धेरै हातले हल्का काम गर्दछ" र हामी, हामी धेरै मानिसहरू हौं, वास्तवमा हाम्रो देश, संसार आबादी हो, त्यहाँ त्यहाँ केहि परजीवीहरू जसले यो चाँडै खेलेको छ र अझै पनि खेल्छन् यसका लागि उनीहरूले यसका बारेमा जानकारी दिएका छन् कि उनीहरुले यसका बारेमा जानकारी दिएका छन्।
दुर्भाग्यवश, हामी पनि यो खेल बेहोशपूर्वक बिट खेल्दछौं। हामी पनि, लोभी हो, र हामी कहिलेकाहीँ हाम्रो पत्नी, ग्राहक, "गुच्छा" धोका गरौं ... तपाई आफैं भर्नुहोला।
र हामी पनि एक (सधैं) ठूलो घर चाहनुहुन्छ, एक थप duuuurdurd auto एक niciiiiere यो वा त्यो ...। आदि आदि
2 अप्रिल 2018 मा 07: 55
म यस सम्बन्धमा मरिआन जुवागेनमसँग नयाँ लिंकको रूपमा (लिंक 'सामान्य', उद्यमी डचम्यानमा राखेको छ?)
यो कमेन्टको बारेमा कम कुराकानी गरिएको शब्दको बारेमा हाल फेसबुकमा घुमाउदै छ र मलाई लाग्छ यो एनएलपी भन्दा पूर्ण छ:
« मार्टिन भिजल्याण्ड फेसबुक पेज सेंसरशिप र एस्पोनेज को लागि हटाइयो
एलोन मुस्कको कम्पनी न्युरीलिङ्कको तंत्रिका लेस प्रत्यक्ष रूपमा DARPA बाट आउनेछ (जस्तै इन्टरनेट र स्मार्टफोनहरू जस्तै) »
कुल भ्रमण: 4.130.180